London Archives | စာမျက်နှာ2၏2| တစ်ဦးကရထား Save
ယူရို ၄၀ မှ Eurostar ရထားဖြင့်လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဥရောပမှာခရီးသွားမှလူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာလန်ဒန်ကနေအမ်စတာဒမ်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ကျော်နဲ့အမြန်ခရီး4သန်းခရီးသည်နှစ်စဉ်ခရီးအောင်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Eurostar မှတစ်ဆင့်ရထားဖြင့်ဖြစ်သည်, နှစ်ခုဆက်သွယ်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သငျသညျဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်လျှင်အကြံပေးချက်များ Interrailing နှင့်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာဖြစ်နိုင်. မီးရထားလက်မှတ်၏ကုန်ကျစရိတ်, နေရာထိုင်ခင်း, အစားအသောက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးဥရောပနိုင်ငံများအကြားကွဲပြားကြဘူး, ဒါပေမယ့်တန်ဖိုးနည်းခရီးစဉ်ကိုခံစားဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. ကံကောင်းတာက, အခြို့သောပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ, အတွက်ရထားလမ်းခရီးသွား…
ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကရိုမန်းတစ်ရထားခရီး
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သငျသညျအနှစ်အိမ်ထောင်သက်ပါပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်နေဆဲ, တိုင်းစုံတွဲအတူတူသုံးစွဲအရည်အသွေးကိုအချိန်ထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျ. Valentine Day ကိုတစ်ခုအားထုတ်မှုစေရန်အထူးသဖြင့်ကောင်းတဲ့ဒါဟာင်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြစတင်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်…